Ukuthola umuthi wokugomela i-Covid kuletha ithemba ngomuthi wokugomela i-HIV/AIDS | Scrolla Izindaba
Ukuthola umuthi wokugomela i-Covid kuletha ithemba ngomuthi wokugomela i-HIV/AIDS
Ososayensi abadalula imfihlakalo ye-Covid-19 kungenzeka ukuthi bavule ukhiye kolunye ubhubhane.
Umuthi wokugoma omusha we-HIV, owasungulwa kusetshenziswa ubuchwepheshe obwenzelwe imishanguzo ye-Covid-19, udlulise isithiyo sokuqala esibalulekile ngemuva kokukhombisa izinga lokuphumelela elingama-97% esivivinyweni sokuqala somuntu.
Indlela efanayo esetshenziselwe ukuthola eminye imithi yokugoma engcono kakhulu ye-Covid-19 ikhombisa nethemba lokuvikela mayelana ne-HIV.
Izindaba zalolu cwaningo zimelela ukuthuthukiswa kwezokwelapha kwakamuva okuzovela kubhubhane lwe-Covid-19. Ngenyanga edlule, sibike ukuthi kunenqubekelaphambili eseyenziwe ekukhiqizeni umuthi wokugomela umalaleveva osebenzayo kusetshenziswa indlela efanayo – eyaziwa ngokuthi i-mRNA. Lobu ubuchwepheshe obusetshenziswa yi-Moderna ne-Pfizer ukwenza imishanguzo yabo ye-Covid.
Isikhungo Sokucwaninga Se-Scripps ne-IAVI senze umuthi wokugoma onale-technology esiza iziguli ukuba zakhe amasosha omzimba alwa naleli gciwane.
Imiphumela ikhombise ukuthi amaphesenti angama-97% ababambiqhaza abangatholanga i-placebo babenohlobo olufunekayo lwe-antibody egazini labo.
UDkt uJulie McElrath, iphini likamongameli omkhulu kanye nomqondisi we-Fred Hutch’s Vaccine and Infectious Disease Division ubize lolucwaningo “ngoluyingqophamlando” emkhakheni wokugomela i-HIV.
Ngenkathi umuthi wokugoma usekude ukuthi ufakwe emjovweni futhi unikezwe umphakathi, izindaba zichaza ukuqhuma okukhulu kwesayensi yokugoma.
Indlela esetshenziswe ukukhiqiza lo mgomo ingasetshenziswa ukulwa namanye amagciwane ngaphandle kwe-HIV.
Indlela efanayo nayo ingasetshenziselwa ukuzama ukukhiqiza imishanguzo emisha yezinye izifo kanye nomalaleveva, njengomkhuhlane, udenga, i-Zika, kanye ne-hepatitis C.
“Lokhu kuhlolwa komtholampilo kukhombisile ukuthi singakwazi ukuqhuba izimpendulo zamasosha omzimba ngezindlela ezingabikezelwa zokwenza imishanguzo emisha nengcono hhayi i-HIV kuphela,” kusho uDkt uDennis Burton we-Scripps Research.
“Le ntuthuko iletha usuku olusha emithini yokugoma.”